Iwu nzuzo | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ - Ịhụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Home Resources amụma nzuzo
Iwu nzuzo a na-akọwa otu Thegwọ Ọrụ usesgwọ si eji ma chebe ozi ọ bụla ị nyere wardgwọ Ọrụ whengwọ mgbe ị na-eji weebụsaịtị a. Foundationgwọ Ọrụ isgwọ Ọrụ gbara mbọ iji hụ na echedoro nzuzo gị. Ọ bụrụ na anyị arịọ gị ka ịnye ụfọdụ ozi nke enwere ike ịmata gị mgbe ị na-eji weebụsaịtị a, mgbe ahụ ị ga-ejide n'aka na a ga-eji ya naanị na nkwupụta nzuzo a. Onyinye wardgwọ Ọrụ nwere ike ịgbanwe iwu a site n'oge ruo n'oge site na imelite ibe a. Kwesịrị ịlele ibe a site n'oge ruo n'oge iji hụ na ị nwere obi ụtọ na mgbanwe ọ bụla. Iwu a dị irè site na 23 July 2020.
Ihe anyị na-anakọta
Anyị nwere ike ịnakọta ozi ndị a:
Aha ndị mmadụ na-edebanye aha na MailChimp
Aha ndị mmadụ na-edebanye aha maka akaụntụ na wardlọ Ahịa Regwọ Ọrụ
Ozi kọntaktị gụnyere adreesị ozi-e na twitter
Ozi kọntaktị nke ndị mmadụ ma ọ bụ òtù ịzụta ngwongwo ma ọ bụ ọrụ
Ozi ndị ọzọ dị mkpa maka ịhazi ebe nrụọrụ weebụ a
Kuki. Maka ozi ọzọ, lee nke anyị kuki Policy
Ihe anyị ga-eme ọmụma ndị anyị nwetara
Anyị chọrọ ozi a iji zaa ajụjụ gị, iji resị gị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ site na ụlọ ahịa anyị, iji nye gị akwụkwọ akụkọ ma ọ bụrụ na ịdenye aha na nyocha nke ime maka nzube ma ọ bụ nzube ahịa.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ wepu aha na Akwụkwọ Akụkọ anyị, enwere usoro akpaghị aka ka ị kwụsị ịnata ozi ndị ọzọ sitere na The Reward Foundation. N'aka nke ọzọ ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị na ibe "Nweta aka" na anyị ga-akwado iwepụ gị na listi ahụ.
Thelọ ahịa ahụ na-enye usoro maka ihichapụ akaụntụ gị. Anyị ga-ehichapụ data onwe gị gbasara akaụntụ ahụ.
Anyị na-agba mbọ iji hụ na ndị ozi gị ala. Iji gbochie n'enweghị ikike ohere ma ọ bụ ngosi, anyị na-etinye n'ime ebe kwesịrị ekwesị anụ ahụ, electronic na nlekọta usoro iji chebe ma nọrọ ná nchebe ozi anyị nakọtara online.
Njikọ ndị ọzọ na weebụsaịtị
Anyị website nwere ike ịnwe njikọ ndị ọzọ na weebụsaịtị nke mmasị. Otú ọ dị, ozugbo ị na-eji ndị a njikọ na-ahapụ anyị na saịtị, ị kwesịrị ị mara na anyị na-enweghị ihe ọ bụla na-achịkwa na ndị ọzọ website. Ya mere, anyị nwere ike ghara ịbụ maka nchedo na nzuzo nke ozi ọ bụla nke ị na-enye ebe eleta ndị dị otú ahụ na saịtị na ndị dị otú ahụ na saịtị na-adịghị achịkwa nkwupụta nzuzo a. Ị kwesịrị ị na-elezi anya ma na-ele ndị nkwupụta nzuzo ọdabara ka website ke ajụjụ.
Ịchịkwa onwe gị ozi
Inwere ike ịrịọ nkọwa gbasara ozi nke anyị gbasara gị gbasara Usoro Nchedo Data 1998. fee ga-akwụ obere ụgwọ. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ inweta otu ozi a ịchọrọ, biko degara akwụkwọ a Reward Foundation c / o The Melting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh, EH2 2PR United Kingdom. Ọ bụrụ n’ikwere na ozi ọ bụla anyị na-ejide gị ezighi ezi ma ọ bụ ezughị ezu, biko degara anyị akwụkwọ ozi ma ọ bụ zitere anyị ngwa ngwa o kwere mee, na adres dị n’elu. Anyị ga-agbazi ozi ọ bụla achọpụtara na-ezighi ezi.
Relọ Nleta wardlọ Ahịa Regwọ Ọrụ
Anyị na-anakọta ozi banyere gị n'oge usoro ndenye ọpụpụ na ụlọ ahịa anyị. Ihe ndị a bụ nkọwa zuru ezu banyere otu anyị siri jikwaa usoro iwu nzuzo n'ime withinlọ ahịa.
Ihe anyị na-anakọta ma chekwaa
Mgbe ị gara na saịtị anyị, anyị ga-eso:
Ngwaahịa ị hụrụla: anyị ga-eji nke a mee, dịka ọmụmaatụ, gosi gị ngwaahịa ndị ị hụworo n'oge na-adịbeghị anya
Ebe, adreesị IP na ụdị ihe nchọgharị: anyị ga-eji nke a maka ebumnuche dịka ịtụle ụtụ isi na mbupu
Mbupu ọbupu: anyị ga-agwa gị ka ịbanye nke a ka anyị nwee ike, dịka ọmụmaatụ, kwupụta mbupu tupu ị debe iwu, wee zitere gị iwu ahụ!
Anyị ga-ejikwa kuki chekwaa ihe dị n'ime nkata mgbe ị na-agagharị saịtị anyị.
Mgbe ị zụrụ n'aka anyị, anyị ga-agwa gị ka ịnye ozi gụnyere aha gị, adreesị ịgba ụgwọ, adreesị mbupu, adreesị ozi-e, nọmba ekwentị, nkọwa kaadị akwụmụgwọ na ozi akaụntụ akaụntụ dị ka aha njirimara na paswọọdụ. Anyị ga-eji ozi a maka ebumnuche, dịka, iji:
Zipu ozi gi banyere akaụntụ gi na ide
Zaa arịrịọ gị, gụnyere nkwụghachi na mkpesa
Nkwụnye ego nkwụ ụgwọ ma gbochie wayo
Debe akaụntụ gị maka ụlọ ahịa anyị
Na-akwado ọrụ ọ bụla anyị nyere n'iwu, dị ka ịkọ ụtụ isi
Meziwanye onyinye onyinye ụlọ ahịa anyị
Ziga gị ozi ahịa, ma ọ bụrụ na ị họrọ ịnabata ha
Ọ bụrụ na ị mepụta akaụntụ, anyị ga-echekwa aha gị, adreesị gị, email na nọmba ekwentị, nke a ga-eji mee ka ndenye ọpụpụ maka iwu iwu n'ọdịnihu.
Anyị na-echekwa ozi gbasara gị maka oge niile anyịchọrọ ozi maka ebumnuche anyị na-anakọta ma jiri ya, iwu akwadoghị anyị ka anyị debe ya. Dịka ọmụmaatụ, anyị ga-echekwa ozi maka otu afọ maka ebumnuche ụtụ isi na akaụntụ. Nke a gụnyere aha, adreesị ozi-e na adreesị ịgba ụgwọ na adreesị mbupu.
Anyị ga-echekwa ihe ma ọ bụ ikwu okwu, ọ bụrụ na ị họrọ ịhapụ ha.
Onye na otu anyị nwere ohere
Ndị òtù anyị nwere ohere ịnweta ozi ị nyere anyị. Dịka ọmụmaatụ, ma ndị nchịkwa na ndị ahịa na-azụ ahịa nwere ike ịnweta:
Ozi nhazi dị ka ihe a zụrụ, mgbe a zụrụ ya na ebe a ga-eziga ya, na
Ozi ahịa dị ka aha gị, adreesị ozi-e, na ịgba ụgwọ na ozi mbupu.
Ndị òtù anyị nwere ohere ịnweta ozi a iji nyere aka mezuo iwu, nkwụghachi ụgwọ usoro ma kwado gị.
Ihe anyị na ndị ọzọ na-ekerịta
N'okpuru iwu nzuzo a anyị na-eso ndị ọzọ na-enyere anyị aka ịnye gị iwu yana chekwaa ọrụ gị; dịka ọmụmaatụ PayPal.
Anyị na-anabata ego site PayPal. Mgbe ịkwụ ụgwọ nhazi, ụfọdụ data gị ga-aga PayPal, gụnyere ozi achọrọ iji hazie ma ọ bụ kwado ịkwụ ụgwọ ahụ, dị ka nzụta zụọ na ozi ịgba ụgwọ.
Biko hụ PayPal Nzuzo Nzuzo maka nkọwa ndị ọzọ.